Ciidanka Galmudug iyo kuwa Xoogga Dalka ayaa saaka la wareegay fariisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen inta u dhaxeysa degmada Xarardheere iyo degaanka Qeycad.
XARARDHEERE, Soomaaliya - War ka soo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa lagu sheegay in ciidamada Huwanta ah ee howlgalka ka wada Koofurta iyo bariga gobolka Mudug, ay saaka gudaha u galeen degaanno ay shalay dagaallo kharaar ka dhceen oo u daxeeyay Qeycad iyo Xarardheere.
“Ciidamada qaranka, kuwa Galmudug iyo naftood hurayaasha deegaanka ayaa si buuxda saakay uga fara maroojiyey kooxda kooxda argagixisada Shabaab saldhigyadoodii maalmihii la soo dhaafay ay ku mintadayeen”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Wasaaradda Aminga GM.
Galmudug, waxa ay sheegtay in qiyaastii 20 qori, raashin, qalab isgaarsiin iyo agab kale ay daadiyeen Kooxda Al-Shabaab, ka hor inta aysan ka firxan degaannada ay saaka galeen ciidanka Daraawiishta iyo CXDS.
“Kooxda fulayada ah ee Shabaab ee degaanadan ka firxatay ayaa lagu soo waramayaa in dadka degaanadan ay qoryaha ka uruursanayaan, loona soo dhiibayo maamuLlada iyo ciidamada huwanta ah”. Ayaa la raacsiiyay warka ka soo baxay Galmudug.
Shalay ayay ahayd markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayd ee Maraykanku duqeyntii Saddexaad ka fuliyeen bariga Muudg labaatan maalin gudahood, waxaana soo baxaya warar sheegaya in in fariisimaha saaka lagala wareegay Al-Shabaab, ay muhiim u yihiin duullaanka ku wajahan Xarardheere.